11 « March « 2011 « Burma Democratic Concern (BDC)
11/03/2011 17:47 / Leaveacomment
11/03/2011 17:43 / Leaveacomment
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း) သောကြာ, 11 မတ် 2011
ဒီကနေ့ ဂျပန်စံတော်ချိန် နေ့လည် ၂နာရီ ၄၆ မိနစ်မှာ တိုကျိူမြို့မြောက်ဘက် မိုင် ၂၃၀ အကွာ မိရဂိခရိုင် ဆဲန်ဒိုင်မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်မိုင်(၈၀)အကွာ ပစိဖိတ်ပင်လယ် ပြင်ရေအောက် (၆) မိုင်နေရာကို ဗဟိုပြု ပြီး ရချက်တာစကေး(၈.၉)ရှိတဲ့ ငလျင်ကြီးလှုပ်ခဲ့တာကြောင့်၊ ဂျပန်ရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်ခြမ်း တခုလုံးမှာ၊ လူသေဆုံးမှုတွေ ဒဏ်ရာရသူတွေ အများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော့၊ လူပေါင်းများစွာဟာလည်း ပျောက်ဆုံးနေကြပါတယ်။
မြို့တော် တိုကျိုမှ အိမ်မြေ ၄ သန်းလောက် လျှပ်စစ်မီးတွေ ပြတ်တောက် နေပြီးတော့ ငလျင်ငယ်လေးတွေကလည်း ဆက်ပြီးလှုပ်ခတ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက နောက်ထပ် အင်အားပြင်း ငလျင်လှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့ သတိပေးမှုကို ကြေညာထားပြီး၊ လူထုတွေကို ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာကနေ အပြင်မထွက်ပဲနေကြဖို့ အမိန့်ထုတ် ထားတာကြောင့် ညနက်ပိုင်း ရောက်လာတဲ့အထိ လူတွေဟာ ရုံးတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေ ထဲမှာပဲ နေနေကြရပါတယ်။
ငလျင်ကြောင့် ဂျပန်အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေက ဆဲန်ဒိုင် Sendai မြို့နဲ့ ဖူကူုရှီးမားခရိုင် (Fukushima Prefecture) အိုနဟမ (Onahama) မြို့တွေမှာ၊ (၃၃)ပေကျော် ဆူနာမီ ရေလှိုင်းလုံးတွေ ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးတော့ ဆဲန်ဒိုင်မြို့မှာတင် ရေအောက်နစ်မြုပ် သေဆုံးသူတွေရဲ့ အလောင်းတွေ (၃၀၀) အထိ တွေ့ရှိရတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆူနာမီရေလှိုင်းလုံးတွေ တက်လာရာ ဂျပန်အရှေ့ဘက် ကမ်းခြေမှာ အရေအတွက် အတိအကျ မသိရတဲ့ ခရီးသည်တွေ လိုက်ပါလာတဲ့ ရထားတစင်းဟာ ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ လူပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ကို တင်ဆောင်လာတဲ့ ခရီးသည်တင် ကူးတို့သင်္ဘောကြီး တစင်းဟာလည်း တိမ်းမှောက်ပြီးတော့ လိုက်ပါလာသူအားလုံး သေဆုံးသွားတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆဲန်ဒိုင်မြိုက အိုနာဂါဝ (Onagawa) နျူကလီးယား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာကြောင့် ရေဒီယို သတ္တိကြွယိုစိမ့်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရေး သီးသန့်ကော်မီတီကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ အစိုးရက ကြေညာထားပါတယ်။ ဖူကူရှီးမားခရိုင်က ဒိုင်အိချိ နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေး စက်ရုံဟာလည်း အအေးခံစနစ် ပျက်စီးသွားပြီးတော့ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ယိုစိမ့်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေရတယ်လို့ သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
11/03/2011 17:41 / Leaveacomment
BDC-TV : Knowledge Bank Programme
11/03/2011 00:24 / Leaveacomment
11/03/2011 00:22 / Leaveacomment
ကိုစံ _ ခန္ဓာငါးပါးပျောက်ဆုံးခြင်းတရား <http://www.mediafire.com/?mwo0dtnkllq>
ကိုတာ + _ လူငယ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်စကားဝိုင်း <http://www.mediafire.com/?yixwmthjuyy>
ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် _ စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း <http://www.mediafire.com/?ymnym1gnkj3>
ကြည်ကြည်မာ _ ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်အက်ဇခါဘန်အကျဉ်းသား <http://www.mediafire.com/?mtemx2zdi2m>
ခင်ဆွေဦး _ စစ်ကိုင်းသမီး ဒိုင်ယာရီ <http://www.mediafire.com/?numgzmwez1x>
ခင်မောင်အေး _ ရောင်စုံရုပ်ပြပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းနှင့်ရှင်ချက်များ<http://www.mediafire.com/?jgnu0mnx2ow>
ချစ်စိန်လွင် _ ဆောင်ကြာမြိုင်မှတ်တမ်း <http://www.mediafire.com/?t0tymunnxiy>
ချစ်ဦးညို _ စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ <http://www.mediafire.com/?kyykiwzz3y5>
ချစ်ဦးညို _ ရုက္ခစိုးမယားနဲ့အခြားပြိတ္တာများ <http://www.mediafire.com/?kmxddty2yjn>
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး _ သွေး <http://www.mediafire.com/?zxcztjymtwt>
ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင် _ သူ <http://www.mediafire.com/?3ynk4y3mdxk>
ငွေကြည် _ ကြွကြွရွရွ ဟာသ <http://www.mediafire.com/?ztfgmugmf43>
ငွေကြည် _ တိုတိုထွာထွာ ဟာသ <http://www.mediafire.com/?imnynnvjdfi>
ငွေကြည် _ ပြည့်ပြည့်၀၀ ဟာသ <http://www.mediafire.com/?mmtyzmqiymx>
ငွေကြည် _ မက်မပြေဟာသ <http://www.mediafire.com/?w3mnjdzvlkr>
ငွေကြည် _ လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဟာသ <http://www.mediafire.com/?mgg4230jmmu>
ငွေကြည် _ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ဟာသ <http://www.mediafire.com/?yojymyyjumo>
စံဇာဏီဘို _ အချစ်ဗေဒင် <http://www.mediafire.com/?5totmnhy42m>
စံဇာဏီဘို _ အချစ်လက္ခဏာ <http://www.mediafire.com/?diiyjqhbtnn>
စိန်စိန် _ ရွှေရောင်ညနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ <http://www.mediafire.com/?4yanzzmni2k>
ဆရာဘေ _ ဇမ္ဗုပတိမင်းချွတ်ခန်းဝတ္ထု <http://www.mediafire.com/?53zetvbmzzj>
ဆန်းလွင် _ ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများ , ၀င်းလိုက်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် ,၁၉၉၉ ဇန္န၀ါရီ <http://www.mediafire.com/?1qzmmvynmfd>
ဆန်းလွင် _ ဖြစ်တည်ခြင်းပဓါန၀ါဒ နှင့်လူသားပဓါန၀ါဒ <http://www.mediafire.com/?gkjtz0iqowy>
ဆန်းလွင် _ ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လူသူ တစ်ယောက်အကြောင်း<http://www.mediafire.com/?jt0t41gwfz7>
ဆွေမင်း. ဓနုဖြူ _ ဘ၀တစ်ခုအမှတ်ရ <http://www.mediafire.com/?xyizzkkne5y>
ဇ၀န _ ကားထဲကမိန်းကလေး <http://www.mediafire.com/?ikjny4wvo5k>
ဇ၀န _ ကျွန်တော့်လင် <http://www.mediafire.com/?yz41nramzwe>
ဇ၀န _ ဆိုးပေ ၁ , မယာမီဒီယာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၀ မေလ <http://www.mediafire.com/?cndmzhzgyly>
ဇ၀န _ ဆိုးပေ ၂ <http://www.mediafire.com/?e2mmhonjgew>
ဇ၀န _ ဆိုးပေ ၃ <http://www.mediafire.com/?50o3yvnkqmm>
ဇ၀န _ သူပုန်ကြီး <http://www.mediafire.com/?ghjj2amr5in>
ဇေယျ _ ဇေယျ စာတန်း , ညွှန့်ဋ္ဌေးစာပေတိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၅ <http://www.mediafire.com/?2h1in2hrmud>
ဇေယျ _ မြန်မာမျက်ပွင့် <http://www.mediafire.com/?xndnby4zt0g>
ဇော်ဂျီ _ ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၃ ဧပြီ <http://www.mediafire.com/?dkwzkyy4wcd>
ဇင်သန့် _ စာဖတ်ခြင်း ၁ <http://www.mediafire.com/?jn2hxmzwiwd>
ဇင်သန့် _ စာဖတ်ခြင်း ၂ <http://www.mediafire.com/?c2lnnzuzjx5>
ဇင်သန့် _ စာဖတ်ခြင်း ၃ <http://www.mediafire.com/?3whtmyczymn>
ညာဏ၀ံသ _ ဂဗ္ဒလီလာကြဏ်း , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက် , ရန်ကုန် ,၁၈၉၉ <http://www.mediafire.com/?giybjqyubmr>
တိုးထက် _ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှလူဝင်စားများ <http://www.mediafire.com/?tuggntjhdui>
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် _ ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ် <http://www.mediafire.com/?jflwkddng2o>
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် _ ပညာရဲ့သဘော <http://www.mediafire.com/?qjqffmwmg0c>
တင်မိုး _ ဖလ်မီးအိမ် <http://www.mediafire.com/?1mizizjwdnz>
တင်မောင် _ တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းက ထန်ထန် <http://www.mediafire.com/?0mmk34kxtx1>
တိုက်စိုး _ ပညာသိုက် <http://www.mediafire.com/?odt4nzlmrny>
ထူးဆွေအောင် _ ဗြောစည်တီး၍လှူလိုက်သည် <http://www.mediafire.com/?hnd2woyywmj>
ထူးဆွေအောင် _ မကြောက်ဖူးလို့ဆို <http://www.mediafire.com/?mttkmk55zjy>
ထူးဆွေအောင် _ မပျော်ရင်ကော <http://www.mediafire.com/?ogn4ziihzny>
ထူးဆွေအောင် _ မန်ကျည်းပင်တန်းရဲ့မီဒီယာ <http://www.mediafire.com/?5nyzmzoglng>
ထူးဆွေအောင် _ မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်မှသဲပွင့်ကလေးများ <http://www.mediafire.com/?m2yq1zmw2wg>
ဒဂုန်ရွှေမျှား _ ကမ္ဘာမြေအောက်ခရီး <http://www.mediafire.com/?jzne3ki0ymo>
ဒဂုန်ရွှေမျှား _ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာနှင့်လက်ရွေးစင်ဝတ္ထုများ <http://www.mediafire.com/?mtzcymmmnjm>
ဒဂုန်ရွှေမျှား _ နီနီလေး <http://www.mediafire.com/?5mtmuogmm3y>
ဒဂုန်ရွှေမျှား _ မေ၀ါ၏ကလဲ့စား <http://www.mediafire.com/?w2ijqym4mdz>
ဒဂုန်ရွှေမျှား _ ရုပ်ထုကျိန်စာ <http://www.mediafire.com/?yy2j2jynzuw>
ဒဂုန်ရွှေမျှား _ ရွှေစင်နတ်ဘုရား <http://www.mediafire.com/?goydytmzdym>
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် _ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး <http://www.mediafire.com/?25atcoym5km>
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် _ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ <http://www.mediafire.com/?jflahzynzdz>
ဒေါက်တာတိုးလှ _ ကုန်းဘောင်ရွှေပြည် <http://www.mediafire.com/?mzy1ynanjmj>
ဒေါက်တာဘမော် _ ဗမာ့လက်ငင်း-လွတ်လပ်ရေး <http://www.mediafire.com/?hjgnzy5naiq>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ တော်ကူးဆရာတော် ဘ၀ဆည်းဆာနှင့် ကျင့်စဉ်တရား <http://www.mediafire.com/?mnazonuiadn>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓဘာသာစာရိတ္တပညာနှင့်ကျင့်ဝတ်များ <http://www.mediafire.com/?hgmuzqxyvqe>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့်ခေတ်သစ်ဘ၀ <http://www.mediafire.com/?yekzyz5mnyz>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် <http://www.mediafire.com/?iy5myzk3mzz>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀ကိစ္စနှင့်ဘ၀ပန်းတိုင် <http://www.mediafire.com/?hdngmmmnyyv>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀ချမ်းသာရေး <http://www.mediafire.com/?zo5m13jinrn>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀ဖန်တီးရှင် ကံတရား <http://www.mediafire.com/?zrkn4qnm2yt>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀လမ်းနှစ်သွယ် <http://www.mediafire.com/?yozezgtlj5h>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀ရည်မှန်းချက်နှင့်ဘ၀ပန်းတိုင် <http://www.mediafire.com/?yinzymdzaqz>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀လွတ်မြောက်ရေးနှင့်အရိယသစ္စာ <http://www.mediafire.com/?jfffdq1myze>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀အောင်မြင်ရေးသို့ရှေးရှုကြ <http://www.mediafire.com/?jjg5ymyj3wn>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများ <http://www.mediafire.com/?u5f2cjgkuzj>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ အကောင်းဆုံးဘ၀လမ်းညွှန်မှု <http://www.mediafire.com/?jxnhzx2yndd>
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်ဧကန်ပိုင် ဒုတိယတွဲ <http://www.mediafire.com/?tnljdvm1m0n>
ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ _ တရားချစ်တဲ့သူ <http://www.mediafire.com/?my2kzmm1io4>
ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ _ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေ <http://www.mediafire.com/?5nmfnz2dgml>
နီကိုရဲ _ ကျွန်တော်နှင့်ဈေးသည်အလွဲများ <http://www.mediafire.com/?1jrznu5klyt>
နီကိုရဲ _ ဇက်ပေါ်ကဆီးသီး <http://www.mediafire.com/?fynhyuztwuj>
နီကိုရဲ _ လွယ်အိတ်ထဲကအလွဲများ <http://www.mediafire.com/?b2jgy3yyn2m>
နီကိုရဲ _ သံစုံကြူးတဲ့ည <http://www.mediafire.com/?gurbiqgo4mm>
နေလင်း _ လူရှင်သင်္ချိုင်းများအကြောင်း <http://www.mediafire.com/?5jme5i2muqq>
နတ်နွယ် _ တဖန်ပြန်၍မနိုးသောဝေဒနာ <http://www.mediafire.com/?nnyzj4omzxq>
နိုင်ပန်းလှ _ ရာဇဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း <http://www.mediafire.com/?mikgmy2nixq>
ပုညခင် _ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု <http://www.mediafire.com/?nmlin4jnyj2>
ဖေမြင့် _ ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် <http://www.mediafire.com/?mdojumyzkj1>
ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် _ သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန် ၂၀၀၇ <http://www.mediafire.com/?w2xznjg0jrw>
ဗဂျီအောင်စိုး _ စာမဲ့ကဗျာ <http://www.mediafire.com/?nidtgyzyiiz>
ဗားကရာဆရာတော် _ အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ ပါဌ်နိဿယ <http://www.mediafire.com/?mmntyxjz4mm>
ဘခိုင် _ ဂျာမဏီအတွင်းရေး <http://www.mediafire.com/?ykd1tzzmzwm>
ဘလော်ဂါနှင့် ကဗျာဆရာ/မများ _ ကောင်းကင်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ<http://www.mediafire.com/?uhxiyieninz>
ဘုရားသားတော် _ သာသနာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနှင့်ဝိနည်းဓိုရ်ဖန်တီးရေးဥပဒေ(မူကြမ်း) <http://www.mediafire.com/?om53zxnzmgj>
ဘန္ဒန္တကိတ္တိသာရ ဓမ္မဒဿနသြ၀ါဒများ <http://www.mediafire.com/?dybndb3lfyl>
ဘဒ္ဒန္တကိတ္တိသာရ _ ဗုဒ္ဓညွှန်ကြား မသေဆေးတရား <http://www.mediafire.com/?zsmx2dablu2>
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ နာဂလိုဏ်ဂူ အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့် လယ်တီဝိပဿနာ <http://www.mediafire.com/?mzzkmymnqzz>
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၃ <http://www.mediafire.com/?nmwjyztknqh>
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၄ <http://www.mediafire.com/?wmwzyum4nl2>
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၅ <http://www.mediafire.com/?u3yj4ziyjfr>
မစန္ဒာ _ ဂျီဟောသူ <http://www.mediafire.com/?tyylnjt3hzt>
မစန္ဒာ _ ပုစ္ဆာ <http://www.mediafire.com/?4ezm2tguhzn>
မ၀င်းမြင့် _ ရေပြာအိုင်မှဇာတ်လမ်းများ <http://www.mediafire.com/?ezmwmzinujg>
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် _ ကဗျာ့နန်းတော် <http://www.mediafire.com/?gjerznjjnto>
မေငြိမ်း _ သတင်းသမားသတိထားစရာ မြန်မာစာနှင့်စကားသံများ <http://www.mediafire.com/?jmdjmzolygu>
မိုးကုတ်ဆရာတော် _ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့ <http://www.mediafire.com/?tykilmjnet4>
မိုးကုတ်ဆရာတော် _ သစ္စာ၎ပါးတရားတော် <http://www.mediafire.com/?mmnyqzydynz>
မိုးကုတ်ဆရာတော် _ဇော၇ကြိမ်အကျိုးပေးပုံ.ကပ်ကျော်တရားတော် <http://www.mediafire.com/?t11ac1wwdnt>
မိုးကုတ်ဆရာတော် _ စူဠဝေဒလ္လသုတ်-၀ိသာခနှင့်ဓမ္မဒိန္နာအမေးအဖြေများ<http://www.mediafire.com/?1ftzjm5yvnz>
မိုးမိုး _ ဝေဒနာကြာနီပွင့် <http://www.mediafire.com/?25ndwmm25mw>
မိုးမိုး _ သိက္ခာရှိတဲ့မုန့်ဟင်းခါး <http://www.mediafire.com/?0mmt5jnhdhn>
မင်းမြတ်သူရ _ ဆားပုလင်းမင်းအောင်နှင့်ပန်းကိုးပွင့်ဒေ၀ီ <http://www.mediafire.com/?yijym5yydyy>
မင်းမြတ်သူရ _ ရွှေချမ်းသာ ငွေချမ်းသာ <http://www.mediafire.com/?zj4mtzno5md>
မင်းလူ _ ချစ်မြားရှင်အစ ချစ်မြားရှင်အဆုံး <http://www.mediafire.com/?m3n4zgetih1>
မင်းသိင်္ခ _ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် ပျားစွဲသောမုတ်ဆိတ်<http://www.mediafire.com/?mqxzomhdmnw>
မင်းသိင်္ခ _ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့်မြိုင်မဟာမမြလေး <http://www.mediafire.com/?yewfu0zzmjo>
မင်းသိင်္ခ _ ပေတလူ <http://www.mediafire.com/?ml21knmljy0>
မင်းသိင်္ခ _ ပုဏ္ဏားဘကွန်း ၁ <http://www.mediafire.com/?2juimngjrmm>
မင်းသိင်္ခ _ ပုဏ္ဏားဘကွန်း ၂ <http://www.mediafire.com/?uqmwhy5tonf>
မင်းသိင်္ခ _ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၁ <http://www.mediafire.com/?jrwmtjojeji>
မင်းသိင်္ခ _ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၂ <http://www.mediafire.com/?d2nh3ynloym>
မင်းသိင်္ခ _ မနောမယထမင်းဝိုင်း <http://www.mediafire.com/?nmqwn4zy2tn>
မင်းသိင်္ခ _ မိုးနဲ့အတူ <http://www.mediafire.com/?diodmmyxymj>
မင်းသိင်္ခ _ မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၁ <http://www.mediafire.com/?dm3wqzqiyhl>
မင်းသိင်္ခ _ မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၂ <http://www.mediafire.com/?tmjkfy4nzg3>
မင်းသိင်္ခ _ မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၃ <http://www.mediafire.com/?emnyzyw2omy>
မင်းသိင်္ခ _ ရေမျှောကမ်းတင်အောင်ဗဒင် <http://www.mediafire.com/?ntnn2fau5my>
မောင်စိန် _ ဘဏ်ငွေစက္ကူတန်ဖိုး <http://www.mediafire.com/?jy5ijzjnoyn>
မောင်ထင် _ ဗမာ့နိုင်ငံရေးသုခမိန် <http://www.mediafire.com/?k52ymmmugu2>
မောင်ထွန်းသူ _ အိုဟင်နရီ၏၀တ္ထုတိုများ <http://www.mediafire.com/?2mnnq4zgmma>
မောင်ဒီ _ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကိစ္စ <http://www.mediafire.com/?zn2imdoeote>
မောင်ထင် _ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်နဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း <http://www.mediafire.com/?zmfyrcnxhz1>
မောင်ပေါ်ထွန်း _ သေပြေးရှင်ပြေး <http://www.mediafire.com/?mwn11zoih5k>
မောင်ဗိုလ်မွှေး _ မြန်မာ့ပုံတိုပတ်စများ <http://www.mediafire.com/?yydmomjmeyz>
မောင်ဘိုသစ် _ ကဗျာရေးနည်း နိသျည်း <http://www.mediafire.com/?an2tzymdidf>
မောင်သာရ _ ကျဉ်တုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့ <http://www.mediafire.com/?t1kz51kwzwn>
မျိုးသူရ _ နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက်. Everyday Internet <http://www.mediafire.com/?jjbyniqdwwz>
မြသန်းတင့် _ နှစ် ၁၀၀ ကမ္ဘာ့စုံထောက်ဝတ္ထုတိုများ၂ <http://www.mediafire.com/?2jhatmy02zy>
မြတ်သူ _ ကိုရမ်အဘိဓါန် ၁ <http://www.mediafire.com/?qyyrntmj2ab>
မြတ်သူ _ ကိုရမ်အဘိဓါန် ၂ <http://www.mediafire.com/?nzomgdymuyy>
မြန်န်မာသမားတော်ကြီးများ _ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ , သုဓမ္မာပုံနှိပ်တိုက်, ရန်ကုန် , ၂၈.၈.၁၉၇၁ <http://www.mediafire.com/?tntyimkmqqb>
ရဝေနွယ် _ ရုပ်လှချင်ရင် <http://www.mediafire.com/?iyvyjn5jrtm>
ရဲကောင်းထက် _ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူများ <http://www.mediafire.com/?4jimx1dklnm>
ရဲစတိုင်း _ ပြုံးပြီးမှရယ် <http://www.mediafire.com/?zd2zjlhfnq5>
ရန်ကုန်ဘဆွေ _ ရွှေဝါပြည် <http://www.mediafire.com/?ndnxybgnooj>
ရန်အောင် _ အိမ်ထောင်ရေးအဘိဓမ္မာ <http://www.mediafire.com/?szzw4hz2p1t>
ရန်အောင်မောင်မောင် _ ထောင်တစ်သက်အတွေ့အကြုံ ,သီရိမေရောင်စုံပုံနှိပ်တိုက်,
ရန်ကုန် , ၂၀၀၄ ဧပြီ <http://www.mediafire.com/?jrefzml0lnf>
ရွှေစကြာ _ ကုန်းဘောင်ပြင်သစ် <http://www.mediafire.com/?nyzyjny0bmz>
ရွှေဘို မိမိကြီး _ အနာဂါရိကဓမ္မပါလ <http://www.mediafire.com/?tmvxdzzivtg>
ရွှေဥဒေါင်း + ၅ _ စာရေးဆရာတို့၏ ပထမဆုံးလက်ရာမွန်များ<http://www.mediafire.com/?n2cnl2megml>
ရွှေဥဒေါင်း _ အတွေးအမြင်နဲ့ရှုထောင့် <http://www.mediafire.com/?xxmcze44xz3>
လှပိုင် _ မဟာသကျသီဟဘုရားသမိုင်း , ၆.၂.၁၉၆၄ <http://www.mediafire.com/?zyjzzmymgmg>
လယ်တီဆရာတော် _ နိုင်ငံခြားပုစ္ဆာ အဖြေပေါင်းချုပ် <http://www.mediafire.com/?yydidzwkue2>
လယ်တီဆရာတော် _ လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ၃ ကျမ်းတွဲ<http://www.mediafire.com/?dnqokwxmmm2>
လယ်တီဆရာတော် _ လယ်တီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များ <http://www.mediafire.com/?mmhizaznnnu>
လယ်တီဆရာတော် _ အဘိဓမ္မာပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း သံပေါက်လင်္ကာ <http://www.mediafire.com/?gjy2yhjtnvz>
ဝေယံလင်းခေါင် _ သူတော်ငတေ၏ဂမ္ဘီရ၀တ္ထုတိုများ <http://www.mediafire.com/?ktnjwtzzkmm>
၀င်းတင့်ထွန်း _ ခြောက်တိုက်မှာ လောက်ကိုက်တာခံဖူးသလား နှင့်အခြားထောင်ဝတ္တုတိုများ <http://www.mediafire.com/?cdntnnitjym>
၀င်းသိန်းဦး _ ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀ဗုဒ္ဓမဝေဖန်နှင့်..<http://www.mediafire.com/?zzjyyhza5ew>
၀င်းဦး _ မိန်းမလှ အမုန်း <http://www.mediafire.com/?hfkj5qwy4zo>
သတိုးတေဇ _ ကွယ်လွန်သူတို့ဝိညာဉ် <http://www.mediafire.com/?dmzzqrn0k5i>
သတိုးတေဇ _ သုဿန်မြေက မိစ္ဆာ <http://www.mediafire.com/?ixwmyltj1wz>
သပြေကန်ဆရာတော် _ ဗောဇ္ဈင်ခုနှစ်ပါးတရားမြတ်ရတနာ <http://www.mediafire.com/?zzlmtmujmnj>
သပြေကန်ဆရာတော် _ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ တရားတော်များ <http://www.mediafire.com/?rz2zz2rmyuy>
သပြေကန်ဆရာတော် _ သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ် ၁ <http://www.mediafire.com/?luwmmvjwmzm>
သပြေကန်ဆရာတော် _ သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ်၂ <http://www.mediafire.com/?mkiac313izo>
သာ.ထွန်း.ပြန့် _ ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက် <http://www.mediafire.com/?tlzrdlmmzh3>
သာဓိန _ ဗေဒနီတိကျမ်း , မဟိန္ဒစာပုံနှိပ်တိုက် , ၁၉၃၀ <http://www.mediafire.com/?njmnwjfyztn>
သာမဏအာဇာနီ _ မှန် <http://www.mediafire.com/?ewcq4ejnymm>
သီလ၀ _ ဗုဒ္ဓအံတော်သမိုင်း <http://www.mediafire.com/?nmoztmz2dgy>
သုခ _ ဂုဏ်ရည်မတူလို့လား <http://www.mediafire.com/?diyghw2dn1g>
သုခ _ မေတ္တသုတ် <http://www.mediafire.com/?tjzlnjihca2>
သုခ _သုခမှတ်စု <http://www.mediafire.com/?4g4ornvndcu>
သုခ _ သည်ဆောင်းဟေမန် <http://www.mediafire.com/?lnmjttyvanz>
သုမောင် _ မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ , ရန်ကုန် <http://www.mediafire.com/?kz0dgjo35zh>
သုသုက _ အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များနှင့်ဂမ္ဘီရဖြစ်ရပ်ဆန်းများ <http://www.mediafire.com/?zj2emnzznyw>
သင်္ဃဇာဆရာတော် _ ဥပါသကောဝါဒဋီကာကျမ်း , မြန်မာသံတော်ဆင့်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်,၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆိုလ <http://www.mediafire.com/?nmzizwd1xl0>
သန်းမြင့်ဦး _ အချစ်ဘ၀နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ <http://www.mediafire.com/?xuzmildjulx>
သောင်းထိုက် _ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး <http://www.mediafire.com/?yhgqwgj3gte>
သိပ္ပံမောင်ဝ _ စစ်အတွင်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်း <http://www.mediafire.com/?5oynmj0ddfz>
သိပ္ပံမောင်ဝ _ အဟိတ်..၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ <http://www.mediafire.com/?boz47c5mni1>
သိပ္ပံမောင်ဝ _ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း <http://www.mediafire.com/?uutwmtlzuym>
သိန်းဖေမြင့် _ တက်ခေတ်နတ်ဆိုး <http://www.mediafire.com/?ewzj2mnymdj>
အကြည်တော် _ ဆွေတစ်ရာ မောင်တစ်ကျိပ် <http://www.mediafire.com/?donyyketozd>
အကြည်တော် _ ဇ <http://www.mediafire.com/?thzizn1iwon>
အကြည်တော် _ တောသားကြီး <http://www.mediafire.com/?yxdmwmigmzo>
အကြည်တော် _ နတ်နေကိုင်း <http://www.mediafire.com/?nznwqrnrgkz>
အကြည်တော် _ ပိုးကောင်များ <http://www.mediafire.com/?fyiyiohzink>
အကြည်တော် _ မိုးတိမ်ပုံပြင် <http://www.mediafire.com/?zt2z1gzmy52>
အကြည်တော် _ သူတို့ပျော်ကြလေပြီ <http://www.mediafire.com/?mzw3dmzynrl>
အကြည်တော် _ သဲလှည်း <http://www.mediafire.com/?iw0diautyvm>
အကြည်တော် _ အချစ်သည်
အကြည်တော် _ အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့်..<http://www.mediafire.com/?hkrgmbznilq>
အရှင်ကောဝိဒ _ တုနိုင်းမမှီ <http://www.mediafire.com/?zfktjggftdt>
အရှင်ဃောသိတ _ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တစ်ဘ၀သာသနာ <http://www.mediafire.com/?yemtgjhaelh>
အရှင်ဇနက-တိသရဏ၀ိဟာရ _ ဗုဒ္ဓဟောမြွက်တရားဦးဓမ္မစက် <http://www.mediafire.com/?mijfywzzeke>
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ <http://www.mediafire.com/?zmxhnzzd1on>
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ဓမ္မစကြာတရားတော်နှင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တရားတော် <http://www.mediafire.com/?mnjtzmmmgxj>
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ရတနာ့ဂုဏ်ရည် <http://www.mediafire.com/?nmimzdjrnwt>
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ သိပ္ပံအမြင်နှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအမေးအဖြေများ <http://www.mediafire.com/?nzzazyyjzdd>
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ အခြေပြုပဋ္ဌာန်း <http://www.mediafire.com/?tm1dmwt5nc2>
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ အနာဂတ်သာသနာရေး <http://www.mediafire.com/?2z3htzydngn>
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ နှလုံးသားမိတ္တူ <http://www.mediafire.com/?yj5ziydvjtb>
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ မိဘကျေးဇူးအကျေဆပ်နည်း <http://www.mediafire.com/?wemnmhtm2z9>
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ လောက၌အကောင်းဆုံးသောအရာ <http://www.mediafire.com/?gl2nqkjyjee>
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ သက်သတ်လွတ်နှင့်ကုသိုလ်စိတ် <http://www.mediafire.com/?92kfbjtvnni>
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ အချစ်ကံခေပေမဲ့အနှစ်ကျန်စေရမယ် <http://www.mediafire.com/?y9m1u091o1i>
အရှင်ဆန္ဓာဓိက _ အနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ် <http://www.mediafire.com/?m2vlszojzbn>
အရှင်ဆန္ဓာဓိက _ အနှိုင်းမဲ့ရဟန်း <http://www.mediafire.com/?h1ld1fvhd4n>
အရှင်ဆန္ဓာဓိက _ အနိုင်းမဲ့ဘာဝနာ <http://www.mediafire.com/?znozjydf2w2>
အရှင်ဆန္ဓာဓိက _ အနှိုင်းမဲ့အဖေါ် <http://www.mediafire.com/?z14wdi4ywld>
အရှင်ဆန္ဓာဓိက _ အနှိုင်းမဲ့အလှူ <http://www.mediafire.com/?udma1zmfmhn>
အရှင်ဆန္ဓာဓိက _ အနှိုင်းမဲ့ဥစ္စာ <http://www.mediafire.com/?0ui3tjblnnx>
အရှင်မဟာသီလ၀ံသ _ ဓမ္မပါလပျို့  <http://www.mediafire.com/?ydyz2mlnmet>
အရှင်ရဋ္ဌသာရ _ ဂမ္ဘီသာရပျို့ စာကိုယ် , မြန်မာ့ယူနီယန်စာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်, ၁၂၈၉ ခုနှစ် <http://www.mediafire.com/?mm0njgzzmym>
အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ _ ဓမ္မချမ်းသာတွေ့အောင်ရှာ <http://www.mediafire.com/?2zxlnm7lrxg>
အရှင်သီဟာဘိဝံသ _ မေတ္တာဘာဝနာရှုဖွယ်ကျမ်း , ပြည်ကြီးမန်တိုင်စာပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် <http://www.mediafire.com/?myqgzd05mhy>
အရှင်အဂ္ဂသမာဓိ _ နေမိမ္ဃစိုးခဏ်းပျို့ , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက်,ရန်ကုန်,၁၉၀၀ခုနှစ် <http://www.mediafire.com/?jmjufgj5tgw>
အီကြာကွေး _ ငုတ်တုတ်ထင်ရှားရေးဖော်များ <http://www.mediafire.com/?qjzwmwmjzz0>
အေးသိန်း _ ရတနာဂီရိ မှ သီပေါမင်းအမှတ်တရ <http://www.mediafire.com/?emjxmzbuj3h>
အောင်ကောင်း _ ချစ်သူမှာတမ်း <http://www.mediafire.com/?hldiffpxxju>
အောင်ဝေး _ ခံစားမှုကထာ <http://www.mediafire.com/?2wmz3z0gzqa>
အောင်သင်း _ ကိုယ်တွေ့ စာစီစာကုံးများ <http://www.mediafire.com/?gmgylmezxga>
အောင်သင်း _ မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္ဓ၀င်မိတ်ဆက်, Future Publishing House
,ရန်ကုန်,၂၀၀၂ စက်တင်ဘာ <http://www.mediafire.com/?myeyzzyjhin>
အောင်သင်း _ ရွှင်ရွှင်ပြုံးပြုံးစာစီကုံး <http://www.mediafire.com/?2zviwlbzznb>
အောင်သင်း _ သူတို့နဲ့ကျွန်တော် <http://www.mediafire.com/?1z1mm4fyw1c>
အောင်သင်း _ သေကိန်းဆိုက်တဲ့ညနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ <http://www.mediafire.com/?xmhjttlewm2>
အောင်သင်း _ အမွေ <http://www.mediafire.com/?y1voj00ijxz>
အုတ်ဘိုဆရာတော် _ စွယ်တော်သျှောင်ရတု , ဟံသာဝတီသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက် ,ရန်ကုန်မြို့ <http://www.mediafire.com/?mymzozjlztl>
ဦးကုလား _ ရာဇ၀င် <http://www.mediafire.com/?tywynuzog3y>
ဦးကံညွှန့် _ နိဗ္ဗာန်ပို့မည့်တရားတော်များ<http://www.mediafire.com/?ivezd4konom>
ဦးကံညွှန့် _ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အခြေခံ၊တရား၊အနှစ်သာရနှင့်ရှုပွါးနည်း <http://www.mediafire.com/?oz04azu4lmi>
ဦးကျော်ဇေယျ _ မြန်မာနိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ <http://www.mediafire.com/?yemy2cqj4tc>
ဦးကျော်ဇေယျ _ ဥပဒေရေးရာဝေါဟာရအဘိဓါန်<http://www.mediafire.com/?jmzzmzi1fjj>
ဦးကျော်ဇေယျ _ ဥပဒေသမား လက်စွဲစကား <http://www.mediafire.com/?2m2zznmakzy>
ဦးကျော်ဇေယျ _ အစုစပ်လုပ်ငန်းအက်ဥပဒေ <http://www.mediafire.com/?fz20w2wm4z1>
ဦးကျော်ရန် _ မူလ=ဆေးအဘိဓါန်ကျမ်း<http://http//www.mediafire.com/?m4rhwctzczg>
ဦးကျော်ရန် _ မူလပေါရာဏဒီပနီကျမ်း <http://www.mediafire.com/?j5th0vnnmj0>
ဦးကျော်လှ _ သံချိုညွှန့်ပေါင်းနှင့် ခဲရာခဲဆစ်အဖြေသစ်<http://www.mediafire.com/?kitzvtcznhn>
ဦးကျော်သိန်း _ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိနှင့်ကျင့်စဉ်<http://www.mediafire.com/?m3cehtzyzz0>
ဦးစိုးလွင် _ အစ္စလာမ့်အတိတ်သမိုင်းမှ အယူဝါဒဆိုင်ရာအရှုပ်အထွေးများ <http://www.mediafire.com/?myny5z1nmwt>
ဦးစက္ကိန္ဒ _ ဥာတပရိညာ <http://www.mediafire.com/?jzdy2dm2gyq>
ဦးစန်းမောင် _ ရခိုင်မင်းသား , သံတော်ဆင့် ,၁၉၄၆ <http://www.mediafire.com/?ijjj3im2tnn>
ဦးဇနိတာလင်္ကာရ _ ပဋိစ္စသမုပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာ အမေးနှင့်အဖြေအကျဉ်းချုပ် <http://www.mediafire.com/?5tmgwdgdixc>
ဦးဌေးလှိုင် _ ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ <http://www.mediafire.com/?wrm2lrgtmyt>
ဦးထွန်းကြည် _ ကောင်းမှုတော်ဘုရားသမိုင်း <http://www.mediafire.com/?jmymnmnnnwt>
ဦးထွန်းလှ _ ရွေးချယ်ရမည့်မိန်းမကောင်း. ရှာဖွေရမည့်ဇနီးလောင်း <http://www.mediafire.com/?1jylymm2myy>
ဦးနု _ တာတေစနေသား <http://www.mediafire.com/?gjzom0kzytp>
ဦးနု _ အာဇာနည် <http://www.mediafire.com/?zmzygnwtl2z>
ဦးပညာ _ ကရင်ရာဇ၀င် <http://www.mediafire.com/?ywgty1zwtxd>
ဦးပုည _ မန္တေလေးဘွဲ့ မော်ကွန်း <http://www.mediafire.com/?jdjzzqknzmg>
ဦးပုည _ ရေသည်ပြဇာတ် <http://www.mediafire.com/?emot3zgymnm>
ဦးဖိုးကျား _ ၃၇ မင်း <http://www.mediafire.com/?qftf2z2yxtx>
ဦးဖိုးကျား _ သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ <http://www.mediafire.com/?yywrfymmtyy>
ဦးဘကြည် _ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ <http://www.mediafire.com/?xdiiaamtnnm>
ဦးဘကြည် _ ရုပ်စုံဗုဒ္ဓသာသနာဝင် <http://www.mediafire.com/?w2mukh1yynw>
ဦးဘဘေ _ နိုင်ငံရေးရာအဖြာဖြာ ဒုတိယတွဲ <http://www.mediafire.com/?inztz0untzj>
ဦးဘသန်း _ ယောနသံဇင်ရော် <http://www.mediafire.com/?jmz1ngh2jjt>
ဦးဘေ _ ၀ရုဏပျို့  <http://www.mediafire.com/?et4mdwuj3gj>
ဦးမောင်ကြီး _ ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးနတ်ဖြစ်ပြဇာတ်သစ် ပထမတွဲ<http://www.mediafire.com/?jauya2tn22v>
ဦးမောင်မောင်သန်း _ ၂၁ ရာစုအင်္ဂ၀ိဇ္ဖာဆောင်းပါးများ <http://www.mediafire.com/?lnzcmnwmmo2>
ဦးမောင်သိန်း _ ပဋာစာရီ- ဒုတိယပိုင်း <http://www.mediafire.com/?yndqoqktmjj>
ဦးရ၀ိန် _ ဥဒကဒီပနီ , မြန်မာသံတော်ဆင့်မီးစက်ကြီး ပှံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်မြို. , ၁၂၄၈ ခု , ကဆုန်လ <http://www.mediafire.com/?2cumdajut2z>
ဦးရဿက _ စတုသစ္စပကာသနီကျမ်း <http://www.mediafire.com/?tdmtmmuyvxd>
ဦးရေ၀တ _ သာသနာ့အမွေကိုခံယူခြင်းနှင့်ငါလုပ်ချင်တာ <http://www.mediafire.com/?nyinmwmdwzy>
ဦးရေ၀တ _ နားလည်နိုင်ခြင်း၏စွမ်းအား <http://www.mediafire.com/?olx4idhijno>
ဦးရွှေအောင် _ ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ် <http://www.mediafire.com/?2dku2ngwmyw>
ဦးရွှေအောင် _ ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့ <http://www.mediafire.com/?5mmjfd51ing>
ဦးရွှေအောင် _ ဓမ္မပဒ <http://www.mediafire.com/?1j42ccxm3cw>
ဦးရွှေအောင် _ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ပေါ်ထွန်းခြင်း <http://www.mediafire.com/?tnung43niwd>
ဦးရွှေအောင် _ ဘ၀အကျဉ်းသား <http://www.mediafire.com/?n4gklnuydtw>
ဦးရွှေအောင် _ ဘ၀အမြင်သစ် <http://www.mediafire.com/?mjfnvxlejqx>
ဦးရွှေအောင် _ အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတွေးအမြင်စာစုများ<http://www.mediafire.com/?j4ymjnomzlt>
ဦးလှ _ ဗမာ့အရေးတော်ပုံ-ပတွဲ , မြန်မာ့သိပ္ပံစာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် ,
ဦးလွှား _ ဓါတ်စာကျမ်း <http://www.mediafire.com/?wzzonwnumlj>
ဦးဝိမလ _ ကင်္ခါမေးခွန်းနှင့်အဖြေ <http://www.mediafire.com/?yy2tyd2d2dm>
ဦးသက်စိန် _ ဗုဒ္ဓသာသနာ့အခြေခံ <http://www.mediafire.com/?meymniefmyz>
ဦးသက်ထွန်း _ အနောက်တိုင်းမှ နုတ်သီးကောင်းလျှာပါးတို့၏အဆိုများ <http://www.mediafire.com/?ibmrtzzjtuz>
ဦးသိန်းဟန် _ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန် ပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် , ၁၉၆၈ မတ်လ <http://www.mediafire.com/?hnl0goygmkh>
ဦးအေးမောင် _ ဗီဇနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် <http://www.mediafire.com/?znemzymmmnm>
ဦးအောင်ခင် _ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူ <http://www.mediafire.com/?qzlndjnw1jf>
ဦးအောင်ခင် _ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ<http://www.mediafire.com/?kmwtewt2e2m>
ဦးဣန္ဒောဘာသ _ ၀ါကျသွားအချိုးအဖြေကျမ်း+၆စောင်တွဲ,ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် ၁၂၉၀ကဆုန်လ<http://www.mediafire.com/?xazew22tmzf>
checkFull(“post-” + “1207318245425369003”);
Sri Arthur Eggar , The Law of Evidence , Varsity Book Club , Burma , 1950 <http://www.mediafire.com/?5kwmydmytxx>
60 Soungs <http://www.mediafire.com/?mxtdemdendm>
Asia’s Cultural Mosaic <http://www.mediafire.com/?wdkmt50m3wm>
Buddha’s Ancient Path <http://www.mediafire.com/?blcwdwmewzu>
Buddha’s Socio-political ideas <http://www.mediafire.com/?njznwyyzyim>
Buddhism inaNutshell <<a onclick=”return top.js.OpenExtLink(window,event,this)” href=”http://www.med